Xiisado saaka laga dareemayo deegaamadii shalay lagu dagaalamay ee Sanaag. – Radio Daljir
Luulyo 18, 2016 11:46 g 0
Badhab, July 19 2016–Warar kala duwan ayaa saaka ka imaanaya deegaamadii shalay lagu dagaalamay ee gobolada Sanaag iyo Haylaan ayaa sheegaya in saaka laga dareemayo xiisado dagaal iyo ciidamo horleh oo deegaamadaasi gaarey.
Wararkii ugu dambeeya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidanka Puntland ay kusii jeedaan deegaamo dhowr ah oo ciidanka Soomaaliland fariisimo ka samaysteen si ay halkaas uga saareen, kadib markii uu shalay dhexmaray dagaal culus.
Dhanka kalena Soomaaliland oo dagaalka guulo kasheegatay ayaa waxaa lasheegay inay boqolaal ciidan ah kusoo daad guraysay gobolada Sanaag iyo Haylaan, si ay sanaadiiqda doorashada xoog ugu geeyaan.
Puntland ayaa dhankeeda xoojisey ciidankeeda jiida hore kusugan waxaana halkaasi kusii qulqulaya ciidankii ka qaybgalay dagaalkii Alshabaab lagula galay qaybo kamid ah gobolada Puntland.